भेन्टिलेटर विदेशमा अड्कियो, यता ज्यान गयो – Online Bichar
Online Bichar 2nd June, 2020, Tuesday 7:08 AM
काठमाडौं, २० जेठ २०७७। कोरोना भाइरसको संक्रमित बिरामीका लागि ल्याउन लागिएकोे भेन्टिलेटर विदेशमा अड्किएको छ ।
डा. पाण्डेले भने, ‘भारतबाट संक्रमित भएर नेपाल आउने क्रमले समस्या बढेको छ । बाटोमा पनि सुरक्षित यात्रा गरेको पाइएन । असुरक्षित यात्रा गर्दै निर्वाध स्वदेश फर्कने क्रम बढेकाले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ ।’ संक्रमितमध्ये अधिकांश २१ देखि ३१ वर्ष उमेर समूहका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिका, जापान र जर्मनीबाट भेन्टिलेटर ल्याउन लागिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । संक्रमित बढिरहेको र नेपालमा रहेका भेन्टिलेटरको संख्या न्यून रहेका कारण तीन/ चार सय भेन्टिलेटर थप्ने योजना रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
सोमबार २ सय ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या १ हजार ८ सय ११ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या २२१ पुगेको छ ।